အချစ်ဆိုတာ သိပ်လှတဲ့ညတစ်ညရဲ့ကြယ်ရောင် လရောင် လင်းလက်ဖြာဝေနေချိန်မှာ စားချင့်စဖွယ် အသင့်ရှိနေတဲ့ ပန်းသီးလေးတစ်လုံးသာ ဆိုရင် အမုန်းဆိုတာ ဘာလဲ ? ကျွန်တော် ထင်တာကတော့ အမုန်းဆိုတာ…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » အချစ်ဆိုတာ သိပ်လှတဲ့ညတစ်ညရဲ့ကြယ်ရောင် လရောင် လင်းလက်ဖြာဝေနေချိန်မှာ စားချင့်စဖွယ် အသင့်ရှိနေတဲ့ ပန်းသီးလေးတစ်လုံးသာ ဆိုရင် အမုန်းဆိုတာ ဘာလဲ ? ကျွန်တော် ထင်တာကတော့ အမုန်းဆိုတာ….
အချစ်ဆိုတာ သိပ်လှတဲ့ညတစ်ညရဲ့ကြယ်ရောင် လရောင် လင်းလက်ဖြာဝေနေချိန်မှာ စားချင့်စဖွယ် အသင့်ရှိနေတဲ့ ပန်းသီးလေးတစ်လုံးသာ ဆိုရင် အမုန်းဆိုတာ ဘာလဲ ? ကျွန်တော် ထင်တာကတော့ အမုန်းဆိုတာ….
Posted by alinsett on Nov 25, 2014 in Arts & Humanities, Creative Writing, Short Story | 27 comments
”အချစ်ဆိုတဲ့ ပန်းသီးကို ….
၂၀၁၄ ၊ နိုဝင်ဘာ ၊ ၂၅ ။ ညနေ။
အချစ်ပန်းးသီးး က ကွဲပြီးးး အချစ် ၂ ခု ဖြစ်လာရောလားးးး
ဒဏ်ရာ ပြန်ကျက်သလို..အသားကျသွားအောင် ပြန် မဆက်ဘူး ။
ပြီးတော့… ဆက်လို့ ရရင်လည်း.. နဂိုအတိုင်းတော့ မဟုတ်တော့ဘူး ။
1. မိမိစာနှင့် အနီးစပ်ဆုံးCategory (တခု)ကိုရွေးချယ်၍ပို့စ်တင်ပါ။ ((Copy/Paste Category)သည် ရှေ့မျက်နှာတွင်ပေါ်မည်မဟုတ်။) Tagထည့်ပါ။ Tagကို စာတလုံးစီကော်မာခံပြီးမှထည့်ပါ
2. Titleကိုတိုတိုရေးပါ။ စာမူရေးသားရာတွင် စာလုံးများကို Spaceခြားပါ။
ဒါကြောင့် ဝတ္ထုတိုဆိုတဲ့ category ကိုရွေးထားပါတယ်။
(ဝတ္ထုတ်ုတစ်ပုဒ်ဆိုတာမှာ ရှိသင့်တဲ့ စံ သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ယှဉ်ထိုးပြီး ဒါဟာဝတ္ထုတို မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ ကျနော့်ဘက်ကလည်း စံ သတ်မှတ်ချက်တွေ ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေကို ဘာကြောင့်ဘယ်လို စွန့်ပယ်လိုက်တယ်ဆ်ုတာနဲ့ ပြန် ရှင်းမှာပေါ့)
ဒီပိုစ့်ဟာ copy/paste မဟုတ် မလုပ်ထားပါဘူးနော့။
ပိုစ့် Title ကို ရှည်ရှည်ရေးပြီး အထဲက စာသားကို တိုတို ကျစ်ကျစ်လုပ်ချလိုက်တာကတော့ တမင်တကာလုပ်တာပါ။
ဒါလည်း စံ သတ်မှတ်တစ်ခုက်ု ဖောက်ထွက် စံသွေလိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ။
ကျန်တဲ့ နွားတွေလည်း ဖြောင့်ဖြောင့်လိုက်မပေါ့ကွယ် …
ငါတို့ကတော့ လူတွေပါ …
ဒါကြောင့် နင် ဘိုလုပ်လုပ် ဘာမှ ဖြစ်ဘူး …
စတန့်ထွင်ချင်တဲ့ အောင်မဲလင်း တော့ မှတ်ကရော ..
နွားဖြစ်ဖြစ် လူဖြစ်ဖြစ် ပညက်တွေချည်းပဲ
နာကလည်း နွားမဟုတ် လူစစ်ကြောင်းသက်သေပြလို့ရသလို
လိုက် လုပ်ချင် လုပ်ကြမယ့်လူတွေကလည်း သူတို့အကန့်နဲ့သူတို့
ရှေ့ဆောင် နွားလား ဖြောင့်ဖြောင့်သွားမှ
နောက်နွားတသိုက် ဖြောင့်ဖြောင့်လိုက် … ဒဲ့
ကိုယ့်အိုင်ဒီယာနဲ့ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်ရမယ်ခေတ်… လို့
ကိုယ့်အိုင်ဒီယာနဲ့ လုပ်ချင်တာသာလုပ်အောင်သရဲလင်း ဘူးမှဂုမချိုက်နဲ့
ပန်းသီး (စားလို့ရတဲ့ပန်းသီး) ကြိုက်တယ်
အချစ်ဆိုတာပန်းသီးဆိုမှတော့ စား သုံး လို့ ရပြီပေါ့ကွယ်
ဓါးနဲ့တော့ မခွဲနဲ့၊ကိုက်စား ကိုက်စား
ကိုက် ကိုက်ပီးစားရတာ ပိုသဘောကျတယ် အူးလေး….
ဒါဆို ဓါတ်တူသွားပြီ တူမ
အဲဒီအချစ်လို့ ယုံကြည်ထားတဲ့ ပန်းသီးထဲမှာ အမျိုးကွဲတွေ အများကြီးပါ ၊
မတူကွဲပြားတဲ့ အရသာတွေနဲ့ပေါ့ ၊
အဲသလိုပဲ တုန့်ပြန်မှုချင်းလည်း ကွာမယ်ထင် ၊
ဓါးနဲ့ အခွဲခံရဖူးတယ် ဦးမျိုးရယ်
နင့်ဘွ ငိုတာတောင် အဖြစ်မရှိ
နာလဲ တူညားသင်ထားလို့ တတ်တာ
လက်မ အားကိုး ရိုက်ရတာဗျ
အဲ့ဒါကို မနေ့က လက်မထိပ် ဓါးရှထားတယ်။
တစ်မိနစ်လေးးကျပ်မို့ မြန်မြန် ရိုက်ခြင်း ရလဒ်ပေါ့
ဒီလိုလေးး ပြန် နိုမယ်လေ
ပထမ ပြောချင်တာကတော့ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ပေါ့နော်.. :hee:
အမှန်တော့ ကွန်မန်းတစ်ခုရေးချင်လို့ ဘာရေးရမှန်းလဲ မသိလို့ပေါ့နော်…
နောက်တစ်ခုက ရှည်လျားလှတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး စိတ်ပျက်လို့ပေါ့နော်…
အဲဒီတော့ ဘေးက ဒူးစာ ဒုန့်စာ အဓိက 2. ကို ကော်ပီဆွဲလိုက်တာပါပေါ့နော်…
အဲ့လိုပြောထားလို့ ကျနော် ဘာ ဘယ်လို လုပ်ထားတယ်ဆိုတာ ပြောဖို့တောင် လမ်းကြောင်းပေါက်သွားသေးးး
အဲ့ ပဒိုင်းသီးဆိုတာကြီး တခါတခါတော့ စားချင်လာတယ်ဗျ။
ဖွေးဖွေးကိုမှ အရွယ်မလွန်ခင် မပေါင်းရရင်
ပဒိုင်းသီးစားမိပြီလို့ မှတ်ပါကွယ် ၊
အိုးမြူး စားချင်ရင် ပဒိုင်းသီးတစ်မွှာရယ်
တော်ပါသေး ရဲ့ ခေါင်းစဉ် နဲ့ တင် ပြီးသွားလို့။
အထဲမှာလည်း..ပါ ပါသေးတယ်…အရီးရဲ့ ။ အဟီး… ။
စတန့်ထွင်ထားတာလေး… လှလားဟင်… ။
သူကြီးရဲ့ စည်းကမ်း 2. Titleကိုတိုတိုရေးပါ။ ဆိုတာကြီးကို ချိုးဖောက်ထားတာ…
သူကြီး မမြင်သေးလို့ တော်ပါသေးရဲ့။
သူကြီး မမြင်လဲ “တညင်သား ” မြင်တယ်လေ။
ဟုတ်သားပဲ…သူကြီး ကိုယ်တိုင်ပြောရမှာ.. အားနာလို့ ဦးတညင်သားကို ပြောခိုင်းတာလားမတိ ။
ဒါလည်း မဟုတ်လောက်ပါဘူး ။
သူကြီးတို့က…. အားနာတယ်ဆိုတာကြီးတော့ … ရှိမယ်မထင်…
အားနာလိုက်တာ… အားနာလိုက်တာ… နဲ့….
အသားတွေ ပဲ့မတတ်…ပါ ပါသွားတာ….
ပြောချင်ရာ ပြောပြီးပြီမို့.. …ပြေးပြီ….ဗျို့